Iwe unogona ikozvino kurodha vhezheni itsva yeDebian 7.0 Wheezy | Linux Vakapindwa muropa
Debian 7.0 Wheezy iri kunze uye yakatakurwa nezvinhu zvitsva
Isu tanga tatofungidzira nhau mukati iri bhurogu yekupedza Debian 7.0 Wheezy, asi ikozvino tinogona kusimbisa kuti inowanikwa zvizere kurodha pasi. Mushure memwedzi yakawanda yekusimudzira uye nekugara uchishanda nenharaunda yeprojekiti, iyo yakagadzika vhezheni 7.0 inozopedzisira yaoneswa (yakagadzikana uye yakaoma sedombo, yakaedzwa uye inopfuura yakaratidza).
Kugoverwa kutsva kunosanganisa kunakidza kwekuita uye kugadzirisa. Inowanikwa kune ese 32-bit uye 64-bit microprocessors (ARM, IA-32, AMD64 kana EM64T, PowerPC, SPARC, IA-64, MIPS, S / 390, System Z,…) uye mune isingasviki mitauro makumi manomwe nenomwe. . Kutsigira kwakawanda-kwemaumbirwo kwave kuri kumwe kusimba kukuru kweiyi purojekiti, kutsigira zvivakwa zvitsva izvo hama dzazvo dzekare dzisina kutsigira. Ndiri kureva, izvozvi zvave kugona kuisa ese 73-bit uye 32-bit software mapakeji pane imwecheteyo system, kugadzirisa kutsamira otomatiki.
Inounza maturusi akakosha muCloud Computing.
Yakagadziriswa mugadziri. Iwe unogona kushandisa kunyange kutaura synthesis software kuiisa (pasina kusimudza munwe, yakanyatsogadzirirwa vakaremara).
Rongedza macodecs uye multimedia vatambi kuti vasavimbe nevechitatu mapato
Native UEFI bhuti rutsigiro (kekutanga), kunyangwe kune Yakachengeteka Boot modhi rutsigiro isu tichafanira kumirira ...
Nyowani vhezheni yeApache server 2.2.22
PBX inoshanda neAsterisk 1.8.13.1
GIMP 2.8.2 Mufananidzo Mhariri
GNOME 3.4 desktop nharaunda, nekutadza. Kunyangwe isu tichigona zvakare kunakidzwa ne KDE Plasma uye KDE 4.8.4, pamwe neXfce 4.8 uye LXDE
Nezve iyo hwindo system, ine iyo vhezheni yeX.org X11R7.7
GNU 4.7.2 vanyori
Icedove 10 uye Iceweasel 10 browser
* Inoshandisa kFreeBSD kernel v8.3, v9.0 uye zvakare, zvedi, Linux 3.2
LibreOffice hofisi suite 3.5.4
Unogona kugovera mafaera neimwe OS neSamba 3.6.6
Dhatabhesi ine MySQL 5.5.30 uye PostgreSQL 9.1
Network yekutarisa neNagios 3.4.1
Java kuvandudza neOpenJDK 6b27 uye 7u3
Python 2.7.3 uye 3.2.3
Tomcat 6.0.35 uye 7.0.28 (servlelts uye JSP)
Kubata pamwe neXen Hypervisor 4.1.4
Uye kana izvi zvikaita sezvishoma kwauri, unogona kuwana makumi matatu neshanu mapakeji esoftware ... Izvo zvinoita kuti ive inofarirwa nevakawanda uye inoshanduka-shanduka kuti ishandiswe kungangoita chero chinangwa.
Nenzira, cherekedza kuti ini ndaisa asterisk mune chinhu pamusoro peiyo kernels yainoshandisa. Mazhinji anogona kunge akaiswa zvisirizvo, asi Debian, kunze kweLinux kernel, inowanikwawo neFreeBSD kernel. Zvichida FreeBSD ine yakaipisisa rutsigiro rwehardware, asi ini ndinofanira kutaura mukufarira kuti inokurumidza kwazvo ... zvakare nharaunda inoitipa iyo nezvose zvigadzirwa zveGNU kuitira kuti usarasikirwa nechirongwa chipi zvacho.
Shamwari, unogona kutoedza kubva pawebhusaiti yepamutemo uye kurodha pasi ISO yeCD, DVD, USB, Blu-ray, kana kana uchida, isai yakananga kubva kunetiweki. Kana iwe uchingoda kuzviedza, iyo "Live" vhezheni yacho inowanikwawo kana iwe uchida kuiswa. Uye hazvisi izvo zvese, kana iwe uchinonoka Internet kubatanidza kana uchingova usina kubatana, unogona kutenga CD / DVD inouya kumba. Iwe haufunge kuti iyi nyowani Debian inoshamisa! Ichokwadi chekuita kanopfuura kamwe kufara!
Mamwe mashoko - Debian 7.0 Wheezy atova nezuva rakarongwa uye mutungamiri mutsva
Yepamutemo webhusaiti uye kurodha - Debian 7.0
Kunobva - Zdnet
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Debian 7.0 Wheezy iri kunze uye yakatakurwa nezvinhu zvitsva
ProjectLibre: Kutonga kweMicrosoft kuri kutyora zvishoma nezvishoma ...
Njodzi dzeWubi uye matambudziko ari mubhutu mbiri pakati peLinux neWindows 8